🥇 ▷ Xaaladaha ayaa muuqda kuwa muujinaya furitaan leh meelo badan oo kaamirooyinka loogu talagalay iPhone-ka soo socda ✅
Xaaladaha ayaa muuqda kuwa muujinaya furitaan leh meelo badan oo kaamirooyinka loogu talagalay iPhone-ka soo socda
Toddobaadka soo socda Talaadada, Sebtember 10, waxaan ballan la leenahay Apple at Masraxa Steve Jobs, Cupertino, si aad u aragto waxa ku cusub taleefannada casriga ah iyo saacadaha smart ee ay shirkaddu u diyaarisay xilli ciyaareedka soo socda. Tilmaamaha ugu weyn ee loo yaqaan “iPhone 11” (sida si kumeelgaar ah loo baabtiisay ilaa Apple ay shaacisay magiciisa dhabta ah) waxay noqon doontaa qaybta sawirka.
Haddii dhammaan wararka xanta iyo daadinta ee bilihii dhowaa la fuliyo, taleefanka cusub ee smartka ah ee Apple wuxuu ku xirnaan lahaa kamarad gadaal saddex-laab ah, shey kor u qaadaya tayada sawirada marinka. Soosaarayaasha kale sida Huawei ama Samsung horeyba waxay u leeyihiin tirodan xasaasiga ah (qaar xitaa xitaa intaa ka sii badan). Iyo caddeyn in lensiska saddex-geesoodka ahi uu dhab noqon karo waa kiisaska.
Dacwadihii ugu horreeyay ee la jaanqaadi kara iPhone 11 waa halkaan
– Marc Alonso (@MARC_intosh) Sebtember 2, 2019
Marc Alonso (@MARC_intosh) la wadaagay Twitter sawir qafiif ah iyo fiidiyoow daboolasho ah oo astaamihiisu u dhigmayaan qaabka kamaradda dambe ee iPhone 11 mustaqbalka.
Intaa waxaa sii dheer, kani maahan markii ugu horreysay ee uu Marc Alonso la wadaago macluumaad dhammeystiray maalmo cayiman kahor Qormada. Bishii Febraayo ee sanadkii la soo dhaafay ayuu Twitter wadaagay, sidoo kale Apple waxay bilaabi doontaa laba iPad cusub iyo inaanan arki doonin jiil labaad oo ah iPhone SE, oo ah 4-inji casriga ah ee dadka Californians-ka. Dhamaadka 2018, Apple waxay si wax ku ool ah u soo bandhigtay laba iPad Pro oo cusub iyo iPhone SE, ma jiraan waxyaabo cusub oo moodeelkan ah.
La wadaag kiisaska muujinaya furitaan leh meelo badan oo kaamirooyinka loogu talagalay iPhone soo socda